ခေါင်းဆောင်မှု အရေးကြီးလား – The Voice Journal
ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားလာရတဲ့ စကားသံတွေရှိတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့တယ်၊ ပြည်သူ့အား အရေးကြီးတယ်၊ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီက ပြင်မှရမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ မှားလားဆိုတော့ မမှားဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ပြည်သူ့ အားကသိပ်အရေးကြီးတယ်။ အများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာ၊ အများဆန္ဒနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာမို့ အဲဒီ ‘အများ’ က ဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်။ တက်ကြွဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံ့အရေးအရာတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့လိုတယ်။
သို့သော်လည်း ဒါက ရှိသမျှပြဿနာအားလုံးအတွက် အဖြေတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ – ပြည်သူတွေကိုအမှိုက်မပစ်ဖို့၊ စည်းကမ်းရှိဖို့ လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းစီက စည်းကမ်းရှိကြပါဆိုပြီး ပြောနေရုံနဲ့ လုံလောက်သလား။ ခေါင်းဆောင်တာဝန်ကျေသလား။ ဒါက ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူလို့မြင်တဲ့သူတချို့လောက်ကတော့ လိုက်နာမယ်။ လူတိုင်းဆီကတော့ ပြောင်းလဲသွားဖို့ မျှော်လင့်လို့မရဘူး။ တခြားနိုင်ငံမှာ အမှိုက်မပစ်ရဲခဲ့တဲ့သူတွေက ဒီနိုင်ငံထဲကျ လွယ်လွယ်ကူကူပစ်နေကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ စနစ်တကျ တန်းစီခဲ့တဲ့သူတွေက ဒီရောက်တော့ အတင်းတိုးနေကြတယ်။ ဘာလို့လဲ။ တခြားမှာက အမှိုက်ပစ်တာနဲ့ ဒဏ်တပ်တယ်။ အလွယ်တကူပစ်လို့ရအောင်လည်း အမှိုက်ပုံးတွေ ထားထားပေးတယ်။ တန်းမစီဘဲ ကြားဖြတ်ရင် အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ ဝိုင်းကြည့်တယ်။ ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုရှိတော့ တော်ရုံလူက ကြားမဖြတ်ရဲတော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကျ ဒဏ်တပ်တာလည်း အားနည်းတယ်။ စာတွေ ဘယ်လိုကပ်ထားကပ်ထားလည်း တကယ်အရေးယူမခံရတာ သိနေတော့ ပစ်ကြတာပဲ။ အမှိုက်ပုံးတွေကလည်း လုံလုံလောက်လောက် မရှိ။ အမှိုက်ပစ်ချလိုက်လို့လည်း ဘယ်သူကမှ အထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ မကြည့်ဘူး။ ဒါက သမားရိုးကျပဲ။ အမှိုက်ထုပ်ကြီးကိုင်ထားတာကမှ ထူးဆန်းနေဦးမယ်။ ဆိုတော့ကာ ပြည်သူတွေ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်မပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးမှာတောင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစည်းကမ်းရှိကြပါ ပြောနေလို့မရဘဲ အမှိုက်ကို စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ပစ်နိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ ဖန်တီးပေးရမယ်။ ပြည်သူတွေကြားထဲစည်းကမ်းမရှိတာဟာ ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို ထည့်ပေးရမယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အသက်ဝင်နေအောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ဆိုလိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း ပြောင်းပါဆိုတာထက် ခေါင်းဆောင်မှု ကောင်းကောင်းပေးပြီး အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးရမယ်။
အစိုးရပိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ဘဲ ပြည်သူ တစ်ယောက်ချင်းစီက အလုပ်တွေကြိုးစား၊ စည်းကမ်းတွေရှိရင်းနဲ့
တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးက မရှိနိုင်သလောက်ပဲ။ စနစ်ကမကောင်း ရင်၊ ပေါ်လစီတွေက လုပ်သာကိုင်သာမရှိရင် ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား ထင်သလောက် မအောင်မြင်ဘူးကိုး။ အချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်ကို ပြည်သူတွေက တစ်သားတည်းပါလာကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုတိုးတက်သွားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် ခေါင်းဆောင်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်း ပြည့်ဝဖို့ဟာ သိပ်အရေး ကြီးပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးချက်ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ
Everything rises and falls in leadership
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှုတွေဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာ အဓိကမူတည်နေပါတယ်။ ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့ နမူနာပေးလို့ရတယ်။ အသင်းက ဒီအသင်းပဲ၊ သိပ်ပြီး မပြောင်းလဲဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့နည်းပြနဲ့တုန်းက တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ အသင်းက ခုလက်ရှိ နည်းပြနဲ့မှ တပ်ပျက်ကုန်တာတွေ အများကြီး။ အဲဒီလိုပဲ၊ နည်းပြလေးပဲ ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ အသင်းသစ်တစ်သင်း အစားထိုးလိုက်သလို ရလဒ်တွေ ထောင်တက်လာတဲ့ အသင်းတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင် သူက အသင်းနဲ့ အံဝင်မယ့်ပုံစံကို သွင်းပေးနိုင်တယ်။ ကစားသမားတွေကို စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ သူတို့ဆီက အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းတွေကို ညှစ်ထုတ်နိုင်တယ်။ အသင်းကို ညီညွတ်စေတယ်။ စည်းကမ်းရှိစေတယ်။ ရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် မယိမ်းမယိုင်နဲ့ ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ ခေါင်းဆောင်မကောင်းရင်လည်း ပြောင်းပြန်အခြေအနေတွေ အကုန်ဖြစ်ရော။ စိတ်ဓာတ်တွေ ကျကုန်မယ်။ ဒီတော့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ညံ့လာတယ်။ ပါရမီရှင်ပါဆိုတဲ့ ကစားသမားတောင် ညံ့တဲ့နည်းပြနဲ့တွေ့ရင် ထိပ်တန်းအဆင့်ကို ထပ်တက်မလာတော့ဘဲ မှိန်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ခေါင်းဆောင်မှုကို သိပ်အလေးထားပြောလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုကို စကားလုံးတစ်လုံးတည်းပြောပါဆို ကျွန်တော်ကတော့ လွှမ်းမိုးမှု (Influence) လို့ ပြောပါမယ်။ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ သူကို ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အကြမ်းအားဖြင့် ပါဝါနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက Positional Power ။ ရာထူးနေရာကြောင့် ရလာတဲ့ပါဝါပေါ့။ အပြစ်ပေးအရေးယူလို့ရတယ်၊ ဆုပေးလို့လည်းရတယ်၊ တရားဝင်လည်းဖြစ်တယ်။ လူတွေက ဒီပါဝါကို မကောင်းဘူး၊ သိပ်အရေးမကြီးဘူး ပြောကြပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလိုအပ်တယ်။ ဥပမာ – ကိုယ်က ရုံးခွဲတစ်ခုက မန်နေဂျာဆိုပါတော့။ ကိုယ့်လက်အောက်ကလူက အဆင်မပြေဘူး၊ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှာက သူ့ကို အပြစ်ပေးလို့မရ၊ အလုပ်ထုတ်လို့မရ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ရုံးချုပ်က တိုက်ရိုက်ကိုင်ထားလို့။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဆို ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာက သိပ်ကောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေမယ့် လူတချို့အတွက်တော့ အံမဝင်နိုင်ဘူး။ ဒီအခါမှာ ခုပြောတဲ့ Positional Power က လိုကိုလိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထက် ပိုအရေးကြီးတာကတော့ Personal Power ပဲ။ ဒီရာထူးကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ သူ့ရဲ့အရည်အချင်း၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကြောင့် ရလာတဲ့ပါဝါ။ ဒီပါဝါကမှ နောက်လိုက်တွေအပေါ် အဓိကလွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်က ရလဒ်ကောင်းတွေ ယူလာပေးမှာ၊ သူနဲ့သာ တွဲလုပ်ခွင့်ရရင် ငါတို့ဘယ်လို တိုးတက်သွားမှာ၊ ငါ့မှာ ပြဿနာတခုခုကြုံတိုင်း ဒီခေါင်းဆောင်က အကူအညီပေးနိုင်တယ် စတဲ့အတွေးမျိုးတွေ ကိုယ့်နောက်လိုက်တွေမှာရှိနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Personal Power က တော်တော်ကြီးအားကောင်းနေပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင် Positional Power က ကိုယ်လုပ်စေချင်တာတွေကို ‘ညွှန်ကြားချက်ထုတ်’၊ လုပ်ခိင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်ပြီး Personal Power ကတော့ ကိုယ်လုပ်စေချင်တာတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ]စိတ်ပါလက်ပါ} လုပ်ချင်လာစေမယ့် အစွမ်းသတ္တိ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖော်ဆောင်ခြင်းက အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲမလုပ်နိုင်ရင် ခေါင်းဆောင်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အဲဒီလိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဆိုရင် မဖြစ်မနေဘာလိုလဲဆိုတော့ Vision လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ ပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ လှည်းတစ်စီးကို လိုချင်တဲ့နေရာ အရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရသလိုပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဒီလှည်းကြီးကို လမ်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေအောင် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဝင်တွန်းနေလို့ မရပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူဟာ ဘယ်လမ်းကသွားရင် အနီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဟာ အရာအားလုံးတတ်သိနေစရာမလိုဘူးဆိုပေမယ့် နောက်လိုက်တွေထက်တော့ ပိုဝေးဝေးမြင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
Knowledge ဆိုတာက Knowing what to do ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိခြင်းဖြစ်ပြီး Skill ဆိုတာကတော့ Knowing how to do ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်မယ့်လူဟာ ဘယ်ဒေသမှာတော့ ဘာရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ် စသဖြင့် ပေါ်လစီချပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်။ သူချပေးလိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်သိတဲ့၊ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ Specialist များက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Leaders do the right things. Others do the things right. ခေါင်းဆောင်များဟာ မှန်ကန်တဲ့အလုပ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်များကို လုပ်ကြရသူတွေဖြစ်ပြီး နောက်လိုက်များကတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။ ဘယ်နံရံမှာ လှေကားထောင်ရမယ်ဆိုတာက ခေါင်းဆောင်က ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။ အဲဒီထောင်လိုက်တဲ့ လှေကားပေါ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်နိုင်ဖို့က နောက်လိုက်တွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Vision မရှိရင် ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်လည်း Vision မရှိလို့ မရပါဘူး။
ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမြဲတမ်းအင်ပြည့်အားပြည့်ဖြစ်နေတယ်။ အဖွဲ့အစည်းသေးသေးလေးတစ်ခုကနေ နိုင်ငံအဆင့်အထိခေါင်းဆောင်တွကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်မပါလက်မပါ မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ အားလုံးကတက်ကြွနေတယ်၊ မာန်ပါနေတယ်၊ တစ်ခုခုကို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ ဟန်ပန်ပေါက်နေတယ်၊ သူတို့ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်းတည်နိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားနေတယ်။ ဘယ်လိုရှုံးနိမ့်မှုမျိုးကြုံကြုံ၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲ ကြုံကြုံ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ရှေ့ဆက်တိုးနေတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျချင်နေတဲ့ နောက်လိုက်တွေကိုအဲဒီ ဟန်ပန်တွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်ကြွအောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အနာဂတ်အမြင် (Vision) ရှိရမယ်ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုအမြင်ရှိနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ အဲဒီအမြင်၊ အဲဒီအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကို လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လည်း အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိရတယ်။ မဟုတ်ရင် မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားမယ်။ ရည်မှန်းချက်ရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့တော့ဆန်ရမယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်က ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကိုရော နောက်လိုက်တွေကိုပဲ နေ့နေ့ညည လှုံ့ဆော်ပေးနေတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ရည်မှန်းချက်တော့ ရှိပါရဲ့၊ လက်တွေ့ဖြစ်မလာရင်လည်းအလကားပဲ။ အဲဒီလိုအကောင်အထည်ဖော်လာဖို့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းဆောင်တွေက Energy အပြည့် ဖြစ်နေရမယ်။ ရလဒ်ထွက်အောင် အလုပ်လုပ်တတ်ရမယ်။
တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာနဲ့ စနစ်တကျဖြစ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးပြီးရည်မှန်းချက်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်လိုက်တစ်ယောက်ချင်းစီဟာ အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းသရွေ့ အပြောင်းအလဲတွေ၊ တိုးတက်မှုတွေဟာ မြန်ဆန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှုဟာသိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ်၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ အနာဂတ်အမြင် (Vision) ) ၊ လွှမ်းမိုးမှု (Influence) နဲ့ စွမ်းအား (Energy တွေရှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာရယ်ကို သိစေချင်ပါတယ်။ 
Next story ဗျူရိုကရေစီရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်
Previous story လစာလှိုင်းပေါ်မှ ကုန်ဈေးနှုန်း